Gufgaf|Online ‘ए मेरो हजुर ३’ को टिजर आईतबार !
‘ए मेरो हजुर ३’ को टिजर आईतबार !
अभिनेता अनमोल केसी अभिनित सिनेमा क्याप्टेन फागुन १७ मा प्रदर्शन हुने तयारीमा छ । केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक भएको यस सिनेमाको ट्रेलरले चर्चा बटुलिरहेको छ । यस पटक अनमोल डेढ महिनाको अन्तरमा दुईवटा सिनेमा लिएर आउनेछन् ।
तर धेरैलाई यो कुरा पत्यार लागेको छैन । अनमोल स्वयमले आफ्ना सिनेमाको प्रदर्शन मितिमा ६ महिनाको अन्तर हुने बताउँदै आएका छन् । यहि कारण यति छिटो उनको दुईवटा सिनेमा आउँछन् भन्ने कुरा पत्याउन धेरैलाई गाह्रो भएको छ ।
अनमोल अभिनित सिनेमा ए मेरो हजुर ३ चैत्र २९ मा नै प्रदर्शन हुने विश्वास दिलाउन सिनेमाका निर्माता सुनिल थापाले आईतबार टिजर सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । यहि मितिमा सिनेमा ‘यात्रा’ पनि प्रदर्शनमा आउँदैछ । केही दिन अघि मात्रै यस सिनेमाको टिजर सार्वजनिक गरिएको छ ।
टिजरलाई दर्शकले रुचाएका छन् । यहि कारण पनि एम मेरो हजुर ३ को निर्माण पक्ष पनि हाल सिनेमाको टिजर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको बुझिन्छ । सिनेमामा निर्माता सुनिल थापा र निर्देशक तथा अभिनेत्री झरना थापाकै छोरी सुहाना थापा र अनमोल केसी मुख्य भूमिकामा छन् ।